Afọ na-enweghị ọkọchị: Kedu mgbe ọ bụ, ihe kpatara na nsonazụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Anyị maara na na ihu igwe e nwere ike ịbụ ihe omume pụrụ iche na-adabere na ụfọdụ kpọmkwem ọnọdụ. Ọnọdụ dị otú a zuru ụwa ọnụ pụrụ ịbụ nke oke ugwu mgbawa na-agbọpụta ọkụ pụrụ imetụta. Onye ama ama afọ na-enweghị ọkọchị site 1816 bụ ihe zuru oke iji tụgharịa uche n'ihe akụkụ ụwa nwere ike imetụta ihu igwe n'ụzọ siri ike.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara afọ n’adaghị ọkọchị na etu ọnọdụ ụfọdụ si emetụta ihu igwe ụwa.
1 A afọ na-enweghị a ndaeyo
2 Mmetụta nke otu afọ na-enweghị ọkọchị
3 Ihe si na ya pụta
A afọ na-enweghị a ndaeyo
N'ihi mgbawa nke Ugwu Tambora, nke bụ ugwu mgbawa nke dị na Bagua ya n'etiti Eprel 5 na 10, 1816, nnukwu igwe ojii nke ntụ na ntụ na-asọpụta na mbara igwe. Ihe karịrị mmadụ 12.000 nwụrụ n'ime awa 24 mbụ, bụ nke kpatara ashfall na pyroclastic na-asọpụta. Mgbe nke ahụ gasịrị, agụụ ọzọ na ọrịa gburu ọzọ mmadụ 75.000 ọzọ mgbe nke a nke kachasị buo ibu n'ime afọ 2.000.
N’ịbụ otu n’ime nsụsị kasịnụ n’ụwa, a na-ebupụ nde ntụ ntụ ya ndị na-agbọpụ ọkụ na nde 55 nke sọlfọ dioxide bụ́ nke rịrị elu ruo a elu nke 32 kilomita na ikuku. N'agbanyeghị na ọ bụ ugwu a gbawara agbawa, ifufe ahụ nwere ebili mmiri siri ike nke na-adọkpụrụ igwe ojii ahụ gbasasịrị agbasasị n'akụkụ ọdịda anyanwụ. Nke a mere ka ihe niile ugwu na-agbọpụ ọkụ wụbara naanị n’izu abụọ.
Ọnwa abụọ ka e mesịrị, mmiri ndị a ruru North Pole na South Pole. Ọmarịcha sọlfọ ahụ dịgidere na ikuku ruo ọtụtụ afọ. N'oge ọkọchị nke afọ mgbe ọ gbawasịrị, e mepụtara ihe mkpuchi fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke kpuchiri ụwa dum. Akụkụ a na-agbanwe agbanwe gosipụtara ìhè anyanwụ ma ghara ikwe ka ụzarị ọkụ rute n'elu, na-ebelata okpomọkụ nke ụwa dum. Na mgbakwunye, ọ kpatara oke ihu igwe gburugburu ụwa. Nke a bụ ihe kpatara afọ na-enweghị ọkọchị mere n'afọ 1816.
Ọ bụghị ụdị mmegwara ọ bụla nke Chineke dịka e chere na oge ahụ, mana nke kacha njọ na-agbawa nke ugwu mgbawa. Nke a na-eme ka ihu igwe dị jụụ site n'ọtụtụ ogogoro ruo ọtụtụ afọ.
Mmetụta nke otu afọ na-enweghị ọkọchị
Mmetụta zuru oke nke jụrụ mbara ụwa dum sitere na Tambora cataclysm ma ọ bidoghị nleba anya ruo mgbe otu afọ gachara. Igwe ojii nke na-achụsasị ụmụ irighiri mmiri na stratosphere belatara ọnụ ọgụgụ nke ike anyanwụ na-erute ụwa. Ikuku, ala ahụ, na oké osimiri mekwara ka okpomọkụ ha belata. Enwere ike ịmụ ihe nke ọma site na mgbaaka uto nke oaks Europe. Nke a studio na-agwa anyị na afọ 1816 bụ afọ nke abụọ oyi na-atụ na Northern Hemisphere kemgbe afọ 1400.
Ka oge ọkọchị na udu mmiri na-aga, igwe ojii ahụpụtara ọmarịcha anwụ na-acha odo odo, odo odo na oroma na London. E nwere ike ikwu na elu igwe gbara ọkụ n’ebe ụfọdụ. N'oge opupu ihe ubi nke 1816 a ka ga-enwe snow na ugwu ọwụwa anyanwụ United States na Canada. Oyi ahụ bịakwara na Tennessee na ihu igwe oyi na-adịgide ruo ọnwa Juun. Ndị a bụ obere okpomọkụ na n'ebe ụfọdụ dị ka New Hampshire ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịkọ ala ahụ.
N’ọnwa a, ikuku dị jụụ na oke ikuku dị egwu dakwasịrị ya Nnụnụ kpọnwụrụ akpọnwụ n'okporo ámá naanị izu abụọ tupu oge anwụ n'oge ọkọchị. Ọtụtụ ihe ubi mechara daa n’ubi n’ihi ntu oyi siri ike. Ọtụtụ ìgwè atụrụ nwụkwara n'oge oyi. Nke a bụ oge mgbe sayensị dị omimi emetutabeghị na enweghị amụma ihu igwe ọ bụla.
Na-anọghị nke sayensị, ndị na-efe ofufe mere ka oké ifufe niile kpatara Chineke mere akara nke iwe Chineke. Europe nwekwara oke oyi na oyi na mmiri mmiri karịa nkịtị. N'ihi oke ọnụ ahịa nke baron, enwere ọgba aghara dị iche iche na France.
Enwere otutu omumu n’ime afo n’enweghi oge oku ma ha dabere na nyocha nke ihe yiri mgbaaka nke oaks Europe. Ihe mgbanaka ndị a na-egosi na afọ a 1816 kacha bụrụ oyi kemgbe 1400. Esemokwu na ndị bi na ya mụbara. Oké oyi na ọkọchị kpochapụrụ ahịhịa na ọka n'ubi n'ọtụtụ ebe, na-enwekarị ifufe Ọktọba n'August. Na mpaghara Europe enwere mmiri ozuzo oge niile na oke snowfull, tumadi na mpaghara ugwu Switzerland. Nke a mere ka osimiri na iyi tojuo.
Thelọ ndị ọrụ ugbo ahụ malitere ịrụ ọrụ ngwa ngwa iji chekwaa akwụkwọ nri na ahihia niile na-ebu ya n'ime ụgbọ mmiri. Ọ bụ naanị ụzọ iji chekwaa ihe ọkụkụ dị ka o kwere mee. Na Germany nduku mebiri emebi na ọnụ ụzọ ala nke oke mmiri ozuzo mebiri ọtụtụ ihe ọkụkụ. Ejikọtakwara ihe ubi ọka, mkpụrụ vaịn achaghị acha n'ubi vaịn ma ahụrụ m ha kwa ụbọchị kwa izu ise n'usoro.
Na Paris enwere ụfọdụ ndị isi ụka nke nyere iwu ikpe ekpere pụrụ iche ụbọchị 9 iji gbalịa ịrịọ Chukwu ka ajọ oge a kwụsị. Ndị ahịa n'ofe Europe bulitere ọnụahịa, ebe nhụjuanya nke ndị ogbenye ruru ọkwa dị egwu, ha niile na-atụ anya maka owuwe ihe ubi na-adịghị mma. Ma na Spain ma na Portugal oyi jụrụ na okpomọkụ nkezi dị ihe dị ka nrịgo 2-3 n’okpuru nkịtị.
Ha nwere oke mmiri ozuzo na ọnwa Ọgọstụ, na-abụkarị ụmụ nwoke. Oyi na iru mmiri mebiri ihe ọkụkụ na mba ahụ dum. Onye na-ekiri mbara igwe kwuru na n'ọnwa Julaị dum, e nwere nanị ụbọchị 3 igwe ojii. Oge oyi ahụ kwụsịrị mkpụrụ osisi, ọkachasị mkpụrụ vaịn, n'ihi na ọ bụ naanị otu obere ihe m kụrụ ka m wetara ya. Nke a mepụtara mmanya dị mma. Osisi oliv na-echekwa oyi na okpomọkụ ma amịpụghị mkpụrụ mara mma.
Na nkenke, ọ bụ ọdachi kpatara nnukwu mgbawa ugwu. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu gbasara afọ na-enweghị ọkọchị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Afọ na-enweghị ọkọchị